प्रेम पछि रियल इन्गेजमेन्ट गरे आयुष्मान र प्रियंकाले, अब बिहेको साईत कहिले ? हेर्नुस् (भिडियो सहित) | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
ईटहरीर नेपालि सिने क्षेत्रका एक युगल र रियल जोडी नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले अन्तत रियालामै इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । लामो समय सम्म प्रेम सम्बन्धमा रहेका यी जोडी काम बाहेक प्रेमका कारण पनि निकै चर्चामा छन् । त्यति मात्र हैन बेला बेला ट्रोल समेत बन्ने गरेका छन् । हेर्नुस बिस्तृत सहितको भिडियो स्
हिजो अर्थात असार ३० गते सनिबारका दिन यो २ बिच दुवै पक्षको परिवार र आफन्त सहित टिकोटालो भएको हो । अलि सुटुक्कै गरिएको यो इन्गेजमेन्टमा फिल्मकर्मीहरुलाई भने निम्तो थिएन तर दुबैले आफ्ना नजिकका सिने क्षेत्रका हस्तीहरुलाई भने इन्गेजमेन्टको बारे सुनाएका थिए ।
प्रेम पछि इन्गेजमेन्ट गरेका प्रियंका र आयुष्मानको विवाहको साईत चाहि कहिले हो त रु यो कुरा भने सार्बजनिक भएको छैन । इन्गेजमेन्ट तस्बिरहरु पुर्व मिस नेपाल जेनिशा मोक्तानले इन्स्टाग्राम बाट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनि नायिका प्रियंका कार्कीको प्रियंकाकी बुहारी समेत हुन् ।